Uhambo oluya ePhuket | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Yini ongayibona, I-Tailandia
Sekuphelile lo nyaka omubi ka-2020. Singaqala ukwethemba ukuthi sizoshiya ubhadane emuva futhi esikhathini esithile esizayo sizokwazi ukuhamba ngokuthula futhi. Futhi uma kunjalo, kanjani Phuket?
IPhuket iparele lasethailand. Okuhamba phambili uma ufuna amabhishi aseparadisi, ubumnandi, ukuphumula nomoya wamazwe omhlaba. Ngemuva kobhadane, ngenhlanhla iPhuket izobe isekhona futhi izosamukela ngezandla ezivulekile.
Kuyinto a isifundazwe saseThailand, esiseningizimu ezweni. Kubuye futhi Isiqhingi esikhulu kunazo zonke eThailand oLwandle i-Andaman. Ine okuhle ithonya lamaShayinaNgakho-ke kunezindawo ezingcwele nezindawo zokudlela eziningi zamaShayina yonke indawo. Kukhona noMkhosi Wabantu Abadla Imifino waseChina obanjwa kanye ngonyaka, oqhubeka nokugubha ukuthandwa komphakathi wasendaweni waseChina.
Isiqhingi sasePghuket inamabhishi amaningi amahle, kufaka phakathi iKaron, Kamala, Kata Noi, Patong noma iMai Khao, futhi mhlawumbe indawo enhle kakhulu yokubona ukushona kwelanga emhlabeni: uLaerm Phromthep. Kepha hhayi konke okungamabhishi azungeze lapha, kukhona futhi impilo eminingi yasebusuku nemizila yomlando ezikumema ukuthi wazi okwedlule.
Ngakho-ke ake siqale nge IPhuket yakudala, idolobha elidalaKuhle kakhulu ukuhlola nokwazi idolobha nabantu bakhona, amaThais, amaShayina, amaYurophu kanye namaSulumane akhethe ukuhlala lapha. I- izakhiwo Kusezimweni eziningi zesitayela samaShayina - isiPutukezi, ezinhlangothini zombili zemigwaqo, futhi zinhle kakhulu kangangokuba ezinye ziguqulwe zaba iminyuziyamu noma izindawo zokudlela noma izitolo noma izindawo zokulala. Vakashela, isibonelo, iPhuket Thai Hua Museum.
Kungasemigwaqweni yesikhungo esinomlando lapho unganambitha i-gastronomy yendawo, uthathe izithombe zabantu abahlala lapho futhi ubone isiko. Uma ungeSonto ungajabulela imakethe yasemgwaqweni, iLat Yai, okuhle ukuzama zonke izinhlobo zokudla.
Ukushiya i-Old Phuket ngaphandle komzila kubheke eningizimu. IKo Racha ineziqhingi ezimbili, iKo Racha Noi neKo Racha Yai. Kokubili kuhle kakhulu amabhishi esihlabathi amhlophe namanzi acwebezelayo ilungele kakhulu ukutshuza. IKo Racha Yai ifakwe zonke izinsiza, kepha iKo Racha Noi iyona ehamba phambili ngokutshuza futhi empeleni amabhasi ochwepheshe kuphela agunyaziwe njengoba kunemisebe ye-manta noshaka abamhlophe.
Ngakolunye uhlangothi ngu isiqhingi esincane saseKo Mai Thon, eningizimu-mpumalanga yePhuket, kuphela i-15 km, enamabhishi amahle ngokwengeziwe. Abahambi abanesikhathi esincane bavame ukudlula lapha njengoba kufinyelelwa kuso ngokushesha ngesikebhe. Olunye ulwandle olupholile ngu Isigqoko Patong. Kusethekwini elinezihlabathi ezimhlophe kanye nethuba lokuzijwayeza yonke imidlalo yezamanzi yezivakashi. Ngasikhathi sinye kunedolobha elincane elizungezile, elihlome kahle kunoma yisiphi isimo ngezitolo, isibhedlela, izindawo zokudlela namahhotela.
IHat Nai Yang ngolunye ulwandle, oluseSirinath National Park nangensimu enhle kaphayini. Izungezwe yizixhobo zamakhorali futhi kunezinto eziningi eziphila olwandle, ikakhulukazi izimfudu zasolwandle ezizozala kusukela ngoNovemba kuya kuFebhuwari. Lokhu kufinyelelwa ngemoto, ngomgwaqo, usuka ePhuket, ushiya idolobha laseThalalang ngemuva. Ngokolunye uhlangothi, Isigqoko sesigqoko Ngulwandle oluncane phansi kwegquma elimbozwe izihlahla zikaphayini ezazikade ziyinkundla yegalufu yeNkosi uRama VII.
Ibhishi linamandla kakhulu futhi lapho lina imvula amagagasi anamandla kakhulu ngakho awukwazi ukubhukuda. Ibhishi likhona Amakhilomitha angama-24 ukusuka edolobheni lasePhuket. Olunye ulwandle oluthule futhi oluhlanzekile I-Hat Laem Sing, enemifula nezihlahla ezinikeza umthunzi. kuyikhilomitha elilodwa kuphela ukusuka eHat Surin, eningizimu. Lokho wukuthi, kunamabhishi amaningi ePhuket into esemqoka ukujabulela ilanga, ulwandle kanye nemisebenzi esogwini: ukuhamba ngomkhumbi, ukudilika, ukubhukuda ngasempumalanga, ukushaywa ngumoya, njll.
Sikhulume ekuqaleni mayelana enye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ukubukela ukushona kwelanga: Laem Phromthep. Kuyindawo eseningizimu kakhulu yesiqhingi, i-cape, ekahle ngokuthatha izithombe ezinhle. Kusukela emaphethelweni ewa ungabona umugqa wemithi yesundu encike kwalasha, kunamadwala olwandle futhi ngale kwawo kubonakala isiqhingi saseKo Kae Phitsadan. Kukhona indlu yesibani futhi, eyakhiwe ngeJubili legolide leNkosi uRama IX, futhi ukusuka lapho umbono ufinyelela kumakhilomitha angama-39.
Esinye isiza sodumo sePhuket, esivakashelwa yibo bonke abavakashi, yi- Ithempeli laseWat Chalong, ithempeli elingokomlando elikhumbuza isibalo sendela, uLuangpho Chaem waseWat Chalong, onguchwepheshe wokuzindla kweVipassana nemithi yesintu. Yanikezwa isikhundla sobufundisi yiNkosi uRama V futhi izinto ezithengiswa lapha, iziphandla, kukholakala ukuthi ziletha ukuvikelwa nenhlanhla. Enye indawo engenakugwemeka yi- IPhuket Big Buddha, egqumeni, ebabazekayo.
Isikhathi esihle sokuya ePhuket, uma uthanda ukuzijabulisa, yiso leso hamba unyaka omusha wasePhuket Chinese, ngemuva nje konyaka omusha waseChina. Inhloso yalo mkhosi wesibili ukukhombisa impilo yasendaweni yedolobha nokunikeza izivakashi isipiliyoni esihle njengoba imigwaqo eminingi yalesi sikhungo esinomlando ivaliwe ezimotweni futhi ihamba ngezinyawo.
Hay imibhoshongo enemibala, abantu abagqoke imvunulo yendabuko, imiboniso yokudla, amatafula okudla kuyo yonke indawo neminye imisebenzi. Usuku lokugcina uSuku Lomkhuleko, isiko lakudala lendawo.
Ukulandela igagasi lezehlakalo nabantu abaningi ePhuket yi IPaki ye-Phuket Fantasea Theme Park, umbukiso obekelwe isiko laseThai. Into enhle ngalokhu ukusebenza okubizwa nge- UKamira emangele, inhlanganisela yobuciko namasiko aseThai ngomsindo, amalambu nomculo kanye nezindlovu ezingaphezu kwezingu-10 nezinye izilwane esigabeni esikhulu. I-buffet iyanikezwa futhi kukhona nezitolo zezikhumbuzo. Kuvulwa nsuku zonke ngaphandle kwangoLwesine, kusukela ngo-5: 30 ekuseni kuya ku-11: 30 ntambama.
Kuze kube manje, ukubuyekezwa kobuhle basePhuket, kepha ngaphambi kokuqeda sishiya okunye amathiphu wokuhambela ePhuket:
. Amabhishi asogwini oluseningizimu ahlala enabantu abaningi, kuyilapho lawo asenyakatho ethule futhi enabantu abambalwa. Iphathi iseningizimu.
. Onke amabhishi amakhulu (i-Kata, Karon, Nai Han, Patong, Nai Han, Nai Yang, Mai Khao), anezinsizakusebenza nemishini yokutshuza, ukuphephetha umoya nokuhamba ngomkhumbi.
. IPhuket yindawo enhle ephephile, ngisho nasebusuku.
. Ungazungeza idolobha nge-tuk-tuk, kunamatekisi, amabhasi, izithuthuthu eziqashisayo nezimoto. Ama-tuk-tuk lapha awafani nalawo aseBangkok, anamasondo ama-4 futhi abomvu noma aphuzi. Amabhasi, iPhuket Smart Bus, asuka olwandle aye olwandle, nasesikhumulweni sezindiza, futhi alula. Uthenga ikhadi likanogwaja phezulu noma esitolo bese kuba yilokho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » Uhambo lwasePhuket
Yini ongayibona eBaiona, eGalicia
Yini ongayibona eSanto Domingo